トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Ekupheleni kwenyanga, ngasekupheleni wamakhaza pachinko kwesici (inkathi yokutakula noma evulekile-ukuphila)
※ kumane ekupheleni
pachinko emakhazeni Sicela ubheke njengoba umkhuba yonke umkhakha, ngicabanga abanye abantu abaye ngizwa amahemuhemu ukuthi ngeke aphume. Eqinisweni, kulungile. Ukuphela wamakhaza pachinko is, kweziningi izitolo, sicela ucabange ukuthi inkathi yokutakula. Ngasekupheleni esicacile sezebhizinisi uhlelo, yenza nesikhathi ukulungiswa lokugcina. (Kuyinto uma uhlangothi flip ukuthi, uma ungazange wenze out kakhulu ibhola ukukhululwa kuze kube kulesi sikhathi, kukhona icala ukuba encishisiwe.) _ X000D_ ezifana
Xintai esikhundleni kanye nokukhangisa izindleko ukuthi umcimbi aphethwe, njengoba izindleko kusukela ekuqaleni kwenyanga inani selitholakele.
Xintai esikhundleni futhi obangela ekupheleni kwenyanga, izindleko njengoba kwenzeka ekuqaleni kwenyanga, ke lelo nani ukuza nakanjani yokutakula kuba nesidingo. Uma uya ngqo ngokohlelo, Angazi ngisho kudingeka kangaka walulama ngisho ukuqeda lwenyanga, izinto pachinko into ngisho like ukugembula ngubani evulekile. Ngesikhathi ebuka idatha
, yesikhulumi inkokhelo ukugeleza kanye abakhiqizi izici, ekugcineni, ngokuhlangana nelwatinchanti lwabo, njll, hit the nail, ngoba sizobe ukucacisa isethi Yiqiniso, phezu ezingalindelekile noma gone, yokuthi or've kuthathwe kungokokwakhiwa ngokuvamile kakhulu emhlabeni.
Ngo Ngakho pachinko emakhazeni, shintsho yokugcina inzuzo yokusebenza, kusuka 20 inyanga ngayinye, saqala ukoma nail, noma ukwehlisa ukushona Horukon, faka yokutakula kohlelo. Ekhuluma kungani lesi sikhathi, iyona 25 inyanga ngayinye umphakathi jikelele, kuyoba payday yakho. Uma kukhona iholo, uma ungaphumi, amakhasimende kimi ukuxosha win kunokujwayelekile. Angaphezu kuka ekuqaleni kwenyanga noma maphakathi, ziwukuthi kungenzeka kimi nge cash.
Ngaphezu kwalokho, kwakhona nje ukuthi kimi nokujaha kancane kakhulu kunokujwayelekile, ngisho noma izimo esiqinile nail nezilungiselelo, yokuthengisa zisesikhathini, uzokwazi ukukhulisa inzalo enkulu. Ezinsukwini ezimbalwa kosuku 25 kakhulu eHholo, yokuthengisa ngaphandle futhi ikhishwe ngigijime inzalo enkulu futhi ngawakhulisa, kuba yokuthi ngesikhathi uthole futhi kakhulu ngenyanga eyodwa.
ngezinga elingakanani Iqiniso lokuthi noma nokuvulwa isikhathi, ngakho woza ahileleke ukubambezeleka kusukela kwebhizinisi plan ye esitolo ngamunye, ungaphindaphindi sebekubeke, lapho usuthathe a lag enkulu ngemuva kusukela uhlelo okwedlulele inzuzo, ukusimama futhi kobubanzi, uyoba Yiqiniso ukwanda.
ekupheleni kwenyanga, izinzipho izinguquko nezilungiselelo kanye, Uma ukulinda isikhathi eside kakhulu futhi ehluleka ngisho usuku olulodwa, kube okwedlulele inzuzo umgomo emgwaqweni ababange zithathwe ngokugcwele. Engxenyeni enkulu plan yokusebenza wamakhaza pachinko izwe okungukuthi yokuthengisa, kuzo zombili isethi ezibizayo inzalo enkulu.
okufanayo nail ukulungiswa, kusho ukuthi ukubeka isethi, uma iqhathaniswa ekuqaleni kwenyanga noma maphakathi, kuyinto ububanzi ezingalindelekile kuba ukuphela ezincane lwenyanga ukuba bavunyelwe. Ngisho kancane, ukuze thembeke walulama, kangakanani zama ukwehluleka ngaphandle ukulungiswa kuphela, isimo ngokwengqondo ekupheleni ohlangothini ukuphathwa sika.
ngoba nje, babe wonke umuntu oma ukuleso simo lakuso umlingisi, kuyinto kungokungenangqondo isikhathi. Ukuze ukulungisa ezinzima kuphela ithoni ambalwa eyodwa wenkokhelo muhle kakhulu. Ithebula okungukuthi nail nezinguquko ezivamile futhi Horukon futhi usethe, kukhona okuhle. Ngaphezu kwalokho, slot, njll, ukuze futhi usethe kalula ushintsho kuka izinzipho ukulungiswa, okwenza kube lula elindelwe ibhola ngaphandle kuqhathaniswa pachinko.
ekupheleni slot, njengoba kuqhathaniswa pachinko, kule game, ungatholi usizo lwakho kodwa kuthiwa isimo disadvantageous. I ekupheleni kwenyanga ungakhohlwa yokuthi kuba inkathi yokutakula, ukuhlola isinyathelo inhloso, kungcono ukudlala ngaphandle nokujaha kakhulu hit kakhulu. Kuyinto ububanzi ezingalindelekile kuba ukuphela ezincane lwenyanga ukuba. Ngisho kancane, ukuze thembeke walulama, kangakanani zama ukwehluleka ngaphandle ukulungiswa kuphela, isimo ngokwengqondo ekupheleni ohlangothini ukuphathwa sika.
ekupheleni slot, njengoba kuqhathaniswa pachinko, kule game, ungatholi usizo lwakho kodwa kuthiwa isimo disadvantageous. I ekupheleni kwenyanga ungakhohlwa yokuthi kuba inkathi yokutakula, ukuhlola isinyathelo inhloso, kungcono ukudlala ngaphandle nokujaha kakhulu hit kakhulu.